Lifestyle - LifeStyle Myanmar - Digital Media Production in Myanmar
လူတွေက သင်ခုချိန်ထိ တစ်ကိုယ်တည်းပဲလားလို့ မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဘာ့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 011
တကယ်တော့ ကိုယ်တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်သလို ဘယ်သူ့ကိစ္စမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ မှားယွင်းတဲ့၊ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အတွေးကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းနေတယ်၊ ရည်းစားမရှိဘူး ဆိုတာနဲ့ သူ့မှာ ဘာများချို့ယွင်းချက်ရှိနေလို့လဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်အတွေးကို စတွေးတော့တာပဲ။ တကယ်တော့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 018
အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ အ၀တ်အစား (၇) မျိုး
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 014
လူဆိုတာ အပြောင်းအလဲလေးတော့ လိုအပ်တာပေါ့။ မိန်းကလေးဆန်ဆန်ဖက်ရှင်မျိုးကြီးပဲ ၀တ်နေတတ်သူက တီရှပ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီလေးဝတ်ကြည့်လိုက်တော့ အမြင်လည်းဆန်းသလို ကိုယ်လည်း အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်သွားရော။ ဒီလိုပါပဲ စိတ်အခြေအနေဆိုတာ ကိုယ်ဝတ်တဲ့ ဖက်ရှင်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့လည်း ပြောင်းလဲနေတတ်တာမို့ မိန်းကလေးတိုင်း၊ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး ရှိသင့်တဲ့ အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။အပေါ်ထပ်ဝတ် ဆွယ်တာသား
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 025
အရက်သေစာသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း စတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု အလေ့အကျင့်များစွာတို့က အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှု၊ မျက်ခွံအိကျမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မျက်ခွံ ညွတ်ကျမှုကြောင့် ရုပ်ရည်ကို စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေတဲ့အပြင် မျက်လုံးကြွက်သား အလေးချိန်တက်လာခြင်းက မျက်လုံးဖွင့်ထားဖို့ ပိုခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် မိတ်ကပ်ခြယ်သရတဲ့အပိုင်းမှာလည်း ပုံမှန်ထက် ပိုမိုခက်ခဲစေပါတယ်။ အိကျနေတဲ့ မျက်ခွံက လိုင်နာတောင့်နဲ့ မျက်ခွံဆိုးဆေးတောင့်
ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ချင်သူများအတွက် အဆိုအမိန့် ၅၀
wall ပေါ်မှာ only me နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Share ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ နည်းနည်းချင်းစီကို သေချာသိအောင်ဖတ်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ်…. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အလုပ်ကို ပခုံးပေါ် ထမ်းထားရတာပါ။ သင်ထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းတွေကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းအားပါ။ လူဆိုတာ
လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အစွမ်းလေးရပ်
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 09
ရေဆာနေသလား၊ လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် (Green Tea) တစ်ခွက်လောက် သောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ရေငတ်ပြေစေရုံသာမက အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေခြင်း ပုံမှန်ထက် ကိုယ်အလေးချိန်များနေသူ ဒါမှမဟုတ် အဝလွန်နေသူတွေ အားကစားလုပ်ရင်း တခြားကယ်လိုရီတူ ဖျော်ရည်သောက်တာထက် လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်ကို သောက်ပေးပါက ကိုယ်အလေးချိန် သုံးပေါင်၊ ဗိုက်အဆီ
ကပ်စီးနည်းတာ ငွေကိုဖြုန်းတီးရာရောက်ပါတယ်—ဘယ်လိုပြု ပြင်ကြမလဲ?
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 017
ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ချွေတာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ိကို ချွေတာတတ်တဲ့ မိဘ ၂ ပါးက မွေးဖွားပေးခဲ့ကြတယ်။ မလိုတဲ့မီးတွေပိတ်၊ ရေကို ချွေတာသုံး၊ ပိုက်ဆံကို မဖြုန်းနဲ့ ဆိုတဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတာပါ။ ဈေးဘယ်လိုဆစ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုညှိရမယ်ဆိုတာကို ကျွန့်တော့်လူကြီးဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးခဲ့တာပါ။ ချွေတာတာကကပ်စီးကုပ်တာအဖြစ်
အနီရောင် အကျီင်္ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်လဲ ‪
by OMCTC January 3, 2016 April 5, 2017 016
အနီရောင်ဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဟုတ်ပါပြီ။ အနီရောင်ဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတွေကရော?? ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ပါသလား?? အနီရောင်ဟာ လိင်ကိစ္စနဲ့တင်မဟုတ်ပဲ လွှမ်းမိုးမှုကိုပါ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာမှာဆို ပိုပြီးသိသာပါတယ်။ အနီရောင် များများပါတဲ့ အထီးတွေကို အမတွေက ပိုပြီး မိတ်လိုက်ချင်ကြပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ကလေးတွေ လက်ညှိုးထိုးပြီးရယ်နေတဲ့ မျောက်ဖင်နီတွေကို တွေ့ဘူးကြပါသလား??
by OMCTC January 2, 2016 April 5, 2017 011
နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွား ပြတဲ့အခါ ဆရာဝန်က လျှာထုတ် ခိုင်းပြီး စစ်ဆေးရတဲ့အကြောင်း ရင်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လျှာကနေတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး လျှာဘယ်လိုအရောင်ဆို ရင် ဘယ်လိုရောဂါကြောင့်ဆိုတာ သိနိုင်အောင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ အနီရင့်ရောင် လျှာရဲ့ အရောင်က ပုံမှန်ဆို ရင် ပန်းရောင်လေးဖြစ်ပေမယ့်
တကယ်တော့ သွားတိုက်တံတွေကို သွားတိုက်ဖို့အတွက်ချည်း မဟုတ်ဘဲ တခြားအရာများစွာအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သွားတိုက်တံသုံးပြီး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကတော့ ၁။ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ လှပနေအောင် သွားတိုက်တံကို စပရေးဖျန်းပြီး ခုလို ဖြီးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ပိုမိုကြည့်ကောင်းပြီး အထာကျတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ရရှိမှာပါ။ ၂။မျက်ခုံးမွှေးတွေ မညီမညာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း သွားတိုက်တံကို အသုံးပြုပြီး